Baahida loo qabo dawooyinka la soo saaray si loo wado koritaanka suuqa caalamiga ah ee dawooyinka - Medicinerawmaterials.com
Baahida loo qabo dawooyinka la soosaaray si loo kiciyo koritaanka suuqa dhexdhexaadka dawooyinka adduunka
Smita Deshmukh waxay sharraxeysaa xaaladda maanta ee suuqa caalamiga ah ee dawooyinka dhexdhexaadka ah, iyadoo soo jeedineysa sida ay u kori doonto mustaqbalka.
Dhex-dhexaadka daroogada waxaa loo isticmaalaa inay yihiin walxo cayriin inta lagu jiro soo saarista daroogooyinka waaweyn. Dhexdhexaadiyayaashan sidoo kale waxaa loo gudbin karaa inay yihiin maaddada la soo saaray waqtiga isku-darka maaddada dawada ee firfircoon (API). Si kastaba ha noqotee, API waa inay maraan farsamooyin dheeri ah ama isbeddello ka hor intaanay noqon badeecad kama dambays ah.
Dhexdhexaadinta daroogada guud ahaan nadaafad ahaan ayaa loo qaabeeyey. Alaabada ceeriin ee heerka sare ah ayaa loo isticmaalaa wax soo saarkooda waxaana lagu dabaqaa warshadaha qurxinta iyo daawooyinka. Shirkadaha ka shaqeeya warshadaha dawooyinka waxay isticmaali karaan daawooyinkan dhexdhexaadka ah ujeeddooyinka R&D.
Waxaa jira dhowr nooc oo dhexdhexaadiyeyaal ah oo loo isticmaalo pharma sida kuwa dhexdhexaadka ah ee dawooyinka badan, daawooyinka xoolaha ee dhexdhexaadka ah iyo kuwa dhexe ee dawooyinka.
Sanadihii la soo dhaafay, suuqa dawooyinka adduunka ee dhexdhexaadka ah ayaa markhaati ka ahaa koboc rajo leh, oo ay keeneen baahida sii kordheysa ee ka timaadda warshadaha isticmaalka dhammaadka isticmaalka.
Suuqa caalamiga ah ee daroogada dhexdhexaadka ah ayaa loo qaybiyaa marka la eego nooca dhexdhexaadiyeyaasha, dhammaadka warshadaha dalabka isticmaalaha iyo juqraafiga. Waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo dhexdhexaadiyayaal daroogo ah oo loo yaqaan 'Advanced intermediate' iyo 'APIs'. API-yada, sidaan soo sheegnay, waxaa loo isticmaalaa inay yihiin alaab ceeriin ah oo dhexdhexaad ah soo saarista daawooyinka daweynta. Kuwani waa maaddooyin firfircoon oo markii dambe loo beddelay qaabab kala duwan sida ganaaxyo, kaabsullo, kiniinno iyo qaabab kale. Sidaa darteed, API lafteeda waxay u shaqaysaa sidii daroogo.
Dhinaca kale, maaddooyinka horumarsan ayaa ah nooca horumarsan ee dhexdhexaadiyaha daroogada. Waxaa jira dhowr nooc oo kala duwan oo ah kuwa dhexdhexaadinta hore sida imatinib intermediates, Capecitabine intermediates, pemetrexed intermediates, lenalidomide intermediates, gemcitabine intermediates, afatinib intermediates, nilotinib intermediates, temozolomide intermediates, pazopanib intermediates and ibrutinib intermediates.
Kordhinta diiradda lasaarayo waxqabadyada R&D si looga caawiyo kobaca suuqa
Marka la eego isticmaalaha ugu dambeeya, suuqa caalamiga ah ee dhexdhexaadinta daroogada waxaa loo kala qaybin karaa warshadaha kiimikada, bayoolajiyadda iyo warshadaha dawooyinka. Waxaa jira dhowr nooc oo kala duwan oo ah dhexdhexaadiyayaal daroogo ah oo la heli karo sida kuwa dhexdhexaadka ah oo tayo sare leh, kuwa tayo sare leh iyo dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo tayo dhexdhexaad ah. Dhexdhexaadyada qiimaha-sare iyo tayada sare leh ayaa badanaa loo adeegsadaa howlaha R&D.
Waxaa jiray shuruudo sii kordheysa oo loogu talagalay dhexdhexaadiyaasha daroogada ee suuqyada caalamiga ah sababtoo ah horumarka degdegga ah iyo horumarka ka dhacaya sayniska nolosha iyo dhinacyada bayoolajiyada. Tan ka sokow, waxaa jiray korsasho sii kordheysa iyo codsiyada sii kordhaya ee daroogooyinka dhexdhexaadka ah ee ku saabsan baaritaanka iyo daraasadaha caafimaadka. Shirkadaha ka shaqeeya qaybaha dawooyinka iyo bayoolajiyada oo ay weheliyaan machadyada cilmi-baarista ayaa hadda si sii kordheysa diirada u saaraya howlaha R&D ee la xiriira sameynta daroogada iyo horumarinta. Waxay sidoo kale fiiro gaar ah siinayaan abuurista farsamooyin iyo habab cusub oo ay weheliyaan qalab loogu talagalay soo saarista daroogada dhexdooda. Mustaqbalka, tani waxay siin doontaa soo-saareyaasha dabacsanaan si ay u bixiyaan heerar sare oo habeyn ah daawooyinka isku-dhafan. Intaa waxaa sii dheer, waxay gacan ka geysatay kordhinta baaxadda barnaamijyadeeda kala duwan waxayna sidaas oo kale ka caawisay horumarka guud ee suuqa caalamiga ah ee daroogada.
Aasiya Baasifigga inay ka taliso suuqa adduunka
Marka la eego kala soocida juquraafi ahaan, suuqyada caalamiga ah ee dawooyinka dhexdhexaadka ah ayaa loo qaybiyay shan gobol oo muhiim ah. Qeybahan gobolada waa Waqooyiga Ameerika, Aasiya Baasifigga, Bariga Dhexe iyo Afrika, Latin Amerika iyo Yurub. Waqtigan xaadirka ah, suuqa adduunka waxaa hogaaminaya qaybta gobolka ee Aasiya Baasifigga. Kobaca suuqa gobolka waxaa badanaa loo aaneeyaa horumarka iyo horumarka laga gaaray dhanka sayniska nolosha iyo bayoolajiyada. Intaa waxaa dheer, heerarka kharashaadka iyo taageerada ee ay bixiyeen quruumaha soo ifbaxaya sida Hindiya iyo Shiinaha si loo fuliyo daraasado cilmi-baaris oo cusub iyo hababka isku-dhafka daroogada ayaa sidoo kale gacan ka geysatey horumarka guud ee suuqa Aasiya Baasifigga.
Qaar ka mid ah noocyada caanka ah ee suuqyada caalamiga ee daroogada waxaa ka mid ah Ami Lifesciences, Accrete Pharmaceuticals Pvt. Ltd, AB Enterprises, Ramdev Kiimikooyinka Pvt. Ltd., Clearsynth, Aarti Drugs Ltd., Shaybaarada Synpure iyo Karvy Therapeutics Pvt. Ltd, iyo kuwo kale.